ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali bebhola baseNigeria I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Big 17'. Indaba yethu ye-Alex Ibi yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa bacinga i-Alex Itbi Biography Story enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye u-adieu, qalisa Qala.
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts-Minyaka yo kuqala
Alexander Chuka "alex" Iwobi Wazalelwa ngomhla we-3rd kaMeyi 1996 eLagos, eNigeria ngoMnu noMnu Chuba Iwobi.
Ngeminyaka eyi-2, intsapho yakhe yafudukela eTurkey ukuze idibene nomama wakhe owayengumdlali waseNigeria uAustin Jay Jay Okocha. Ngelo xesha, Okocha wayedlala eFenabache. Ku-2002, xa wayengu 4, uWibibi wanyiswa eLondon yintsapho yakhe emva kokuba umalume wakhe abuyele khona ukuze adlale neBolton Wanderers. Wakhuliswe ngokupheleleyo kwindawo yaseMpumalanga yaseLondon kufuphi neBolton Wanderers.
ENgilani, waqala ukudlala ibhola kunye nabahlobo bakhe abasondelene neendawo ezikufutshane nefa lakhe.
I-Alex Itbi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Qalisa Umsebenzi
U-Iwobi wasayina i-Arsenal ngoxa esesesikolweni esiprayimari kwiminyaka yesibhozo. Ukutyikitya kwakhe kwiqela liye lathonyelwa nguAustin Jay Jay Okocha.
U-Alex Iwobi- Ukutyikitya kwiArsenal
Wakhela ubomi apho ahlukeneyo aphakathi kokudlala ibhola kunye nokufunda. Ixesha lakhe lomsebenzi wolutsha kwi-Arsernal lafika ngexesha apho iqela liye lincinci yebhola leNgesi.
Uqeqesho lwe-Alex Iwobi lwaBantwana kunye neArsenal
UAlex Ubi wayengumntwana onwabileyo kwi-Asernal kwaze kwaba yintlekele. [Funda Ngezantsi].
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts-Ukuba i-Going Ifumana iTough
Izinto azizange zihambe kakuhle ekuqaleni kwakhe njengoko wayesondele ekukhutshweni yiqela lakhe xa wayeseneminyaka elishumi. Umama wakhe akazange aziqhenye ngokusebenza kwonyana wakhe njengoko bamthumelela incwadi yokukhangela. Oku kwakusondeza intsapho.
U-Alex Itbi ufunda incwadi evela e-Arsenal esongela ukukhulula unyana wakhe
Ngokutsho kukaIbibi, "Ngenxa yokuba andingekho mkhulu, ngokukhawuleza okanye ngomelele njengabo bonke abantu, kwakukho umbuzo kum kunye nokukwazi kwam ukuba andizange ndizinge kumdlalo njengoko ndifanele. Kwakuphazamisekile kuba ndibethelela esikolweni, ndandisoloko ndicinga .. 'Yintoni endiyenzayo ukuze ndiphucule?' Ndiza kuba neeseshoni ezongezelelweyo kunye noba okanye abahlobo. Umama wam wenza wandenza ukukhaba kwiindawo zokuhlala. Udadewethu wazama nokudlala ibhola. Kwaye umama wammema umzalwana wakhe Okocha kunye nomhlobo wakhe uKanu beza kuza kuba neeseshoni zokuqeqesha kunye nam. Wonke umntu, wayezama ukundinceda. "
Ngokwemvelo, bonke babeziqhenyce ngendlela u-Iwobi ajika ngayo izinto. Kamva nje njengomdlali weqela lesigqirha, waba nesibindi kwi-pitch kwaye ufunde ukungaziboni kwiingxaki zomzimba. Yiloo nto uKanu no-Okocha bamfundisa.
UArsena wachukumiseka gqitha naye. U-Ubi wasebenzisa elo qonga ukuba azibonakalise kwaye wabakhokela iqela lakhe elutsha ukuba athole ama-trophies.
U-Alex Iwobi- Ukubuyisela kwimpumelelo
Kwakhona, wazama imini ngemini ukuba akhe kwimveliso engapheliyo. "Yiloo nto abadlali abakhulu abaye bayayiqonda ngayo, bafaka iinjongo okanye benze iinjongo," UWibi uthi.
Yayinjongo ayifumene neBasel eyamnika ukuzithemba kwiqela leArsenal ekugqibeleni. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts-Ubomi Bentsapho
U-Alex Iwobi uvela kwimvelaphi yentsapho ecebileyo ngenxa yokusebenza kwabo nzima kunye neentlobano zesini, iintsapho zabo UAustin Jay Jay Okocha, e-Nigerian yamazwe ngamazwe.
UTATA: Uyise ka-Alex Itbi, u-Chuba Iwobi wayengumdlali webhola lebhola, owamshiya umsebenzi wakhe webhola ekhatywayo ukuba afunde umthetho ukuze anakekele intsapho yakhe kwaye aqinisekise ixesha elizayo.
Indodana yakhe, u-Alex ekugqibeleni waya apho ayeke khona.
Namhlanje, uIbibi ubeka igama lentsapho kwiimboniselo zeTV emhlabeni jikelele ngeemidlalo zakhe ezimangalisayo kwiArsenal.
Uyise kaIbibi, uBarterter Chuba uyincedisa ukuba unyana wakhe abe nolwazi ngeendawo zaseNigeria kunye nenkcubeko.
Alex Iwobi noBawo, uBharrister Chuba Iwobi
UMAMA: Unina naye ungoNigerian ngokuvela. Ungudade waseAustin Jay Jay Okocha. Uthando lwakhe ngo-Alex ukususela ebuntwaneni alufani nakwezinye ihlabathi. Enyanisweni, intliziyo kayinina yakhe ibe nayo ukususela ngomhla omnye. Oku kubonakaliswe kumfanekiso apha ngezantsi.
UAlex Alex Ibi noMama
USISI: U-Alex Itbi usondelene kakhulu noodadewabo, uMarie. Inyoko ngumfanekiso wakhe, uyise kunye nodade onomhle uMarie.
UMarie Itbi, umntakwabo, uAlex noBawo
Ngesinye isikhathi waya kumtyelela kwipyunivesithi, ukutsala i-hood ukwenzela ukuba angayifaki nayiphi na ingqalelo.
"Ndifuna nje ukunandipha ixesha kunye nodadewethu," uthi. "Sondele, sihlala kunye kunye, sihleka. Ndihlala ndizama ukumnyamekela. "
UNCLE NO MENTOR: UAlex Nibi Jay Jay Okocha umntakwabo kwaye uphefumlelwe kakhulu ngumhlala-phantsi waseNigeria osemdlaleni owamncedisa wathola indawo yakhe kwiqela leSizwe laseNigeria.
Unayo umalume wakhe uJay-Jay [Okocha] ukujonga phezulu njengomcebisi. Nangona kunjalo, usafuna ukufumana impumelelo yakhe njengabanye abadlali. Ngamazwi 'Ndiyamthanda ungumntakwabo kaYay-Jay kodwa ndifuna ukumisa ubuni bam, ndifuna abantu bandizi njengo-Alex Iwobi kunye no-Alex Iwobi, umntakwabo kaJay-Jay, ebonakala ngokucacileyo ezininzi izibongozo.
Ngokutsho komhlobo osondeleyo we-Iwobi; "Ndiyathetha, uJay-Jay ube ngumcebisi wakhe, uyamkhuthaza, umxelele ukuba uya kuphi na indlela yokuziphatha ngayo. Kwiqhinga lezinto, ufuna ukuba nobuni bakhe njengomnye umdlali, ngoko uAlex Agibi nguAlex Iwobi. Kwaye ndivuyayo ukuba uqala ukuzibamba aze abe ngu-Alex Iwobi. Ngomsebenzi onzima nokuzinikezela, unokufumana ngcono kwaye ngumthandazo womzali ngamnye. "
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Ulwalamano lobomi
U-Alex Itbi usebudlelwaneni bomnyaka we-4 kunye nentombi intombi uClarisse Juliette ongumzekelo wase-UK.
U-Alex Itbi Intombi-uClarisse Juliette
Imodeli yase-UK idla ngokukhawuleza ngoAlex kwaye ihlala ixelela iifoto zakhe njengesibonakaliso sokubonisa ukuba uyamthanda kangakanani.
UClarisse Juliette wabonisa intombi yakhe kwimidiya yoluntu
Nangona kunjalo, izinto azizange zihambe kakuhle xa wayegubha iminyaka yakhe yokuzalwa ka-21st. Baqhekeza !!
Isiqabane esithile sangaphambili siye satshintshana esinye nesinye isitho esivela kumaphepha abo abezindaba. Njengoko ngexesha lokubhala, aphinde alandelane kwi-Instagram.
Amafayili aqaphele oku xa uAbram ebhiyozela ukuzalwa kwakhe kwe-21st kwaye akazange afumane ukumemeza kokuphuma kuJuliet. Kwakhona wayengabonakaliyo emkhosini wokuzalwa owawuhlala emzini womzali wase-Alex eLondon.
Ngaphandle kwamaxesha apho uClarisse egubha usuku lwakhe lokuzalwa ngo-Meyi 2nd, uAlex waziwa ukuba amsoloko ememeza. Eli xesha, akukho nto eyenzekayo. Emva komhla wokuzalwa kwakhe, uJuliette wabelane ngevidiyo kwiSpapchat yakhe yokubamba amanqaku edoli kunye neengcaphuno 'awuyi kuphinda ufumane i-bitch yakho'.
Intombi ka-Itbi eqinisekisa ukuhlukana nendoda yakhe
Wayibhala uAlex Ibibi 'umculi' ngenxa yokungathembeki. Uthando olukhulu oluye lwaba nalo, ngoku luye lwaphela.
U-Alex Iwobi noClarisse Juliette- Ngesinye ixesha Abathandi
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts:Uthetha iPidgin kwaye Uqonda Igbo
UIbi akathethi ulwimi lwaseNigeria lwesiGbob kodwa uyayiqonda ulwimi. Uyakuqonda ulwimi lwaseNigeria lwaseYoruba. Kodwa uthetha kakuhle iPidgin Xhosa kwaye uyisebenzisela ukuthetha nomhlobo wakhe waseNigeria.
Ngokutsho kwabazali bakhe, 'Sicinga ukuba siyaphumeleli ngenxa yethu kuba sinokwenza okungakumbi ukuyenza iqonde Igbo.'
Abaninzi baseNigeria bavuyiswa kukuba iIbibi ithatha ulwimi lwendalo yonke 'Pidgin English' kwaye wenza umgudu ukuthetha neqela lakhe-abafazi kulo. Kwiqela leSizwe laseNigeria, unabantu base-Igbo nabantu baseYoruba kodwa ulwimi lwendalo yonke yiPidgin. Ukuhlangana kwakhe kokuqala kunye noPidgin kwakukho xa wamenywa ukuba ajoyine iqela lesizwe laseNigeria eliphantsi kwe-23.
Ngokutsho koyise, "Ukuphucula ngoku ngoku kwaye kuza kwinqanaba apho eqonda yonke igama likaPidgin kodwa ke yena unzima ukubeka iingcamango zakhe kumagama angama-pidgin. Ngoko unengqiqo efanelekileyo yePidgin kwaye ngelixa efika ngokuthe gqolo ekampini, ndiqinisekile ukuba uya kuphucula, " Uyise kaIbibi watsho injongo.
I-Alex Itbi Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts-Ukuthanda kwiiNigerian Foods
Mhlawumbi uye wakhulela e-United Kingdom njengesizwe saseBrithani kodwa u-Iwobi uyakuthanda ukutya kwaseNigeria, kunye nobunzima bakhe Eba kunye ne-Okra isobho kunye neentlanzi. Amazwi kayise ...
Ukudla okuthandayo ngu-Alex Itbi-Okra, Eba kunye neNtlanzi yaseStw
"Uya kundibulala ngenxa yale nto, kodwa ukudla okuthandwayo ngu-Alex kuba yi-eba (isitofu esenziwe ngomgubo we-cassava) kunye ne-okra isobho eyenziwa ngumama wakhe. Le mihla, udla zonke iintlobo zokutya zaseNigeria. "
I-Alex Itbi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuza kwakhe kokuqala eNigeria
Emva kokuchitha ixesha lobomi bakhe eNgilani, uye wamangaliswa yindlela abantu baseNigeria abasabela ngayo xa eqala ukuya ezweni ukumela ii-Super Eagles.
"Wonke umntu uyakuxabisa. Uphantse ube njengenkosi! "Utsho. "Xa ndifika kwisikhululo sam moya ndacinga ukuba, ndiza kuba nee-earphone zam, kodwa wonke umntu wayefana no-'Ibibi! Iwobi! ' Oh gosh. Molo Bafana! Andizange ndikwazi ukuba ndilindele ntoni. Kwakubuhlungu nje. Emva koko ndaqalisa ukuhamba Kelechi Iheanacho ngubani ongumfana onoNaija obunzima kakhulu. Naluphi na esiya khona, siya kufakwa. Ngenxa yokuba andisetyenziswanga kwiinkcubeko zaseNigeria njengokuba kunjalo, undibanceda. Andikwazi ukuthetha ulwimi olulungileyo. Bandinceda namaphupha. Amafa ahluke kakhulu apho. Abafuni kundibuza nge-autographs, bacela kuphela iibhotshi, iirejista kunye neentlawulo zemali.
Kuyafaneleka ukuphawula ukuba Kelechi Ihenacho Uhlobo luka-Alex. Unalo nolwalamano olomeleleyo kunye Ahmed Musa kwaye Mikel Obi.
UIbi waqhubeka ....
"Ekuqaleni kwam sidlala kwibala le-30,000 kwaye kwakukho i-60,000-andiyiqondi indlela. Abantu babemi kwiimpawu zogqobhozi, kwibhodi yebhodi. Ndandicinga, 'Yintoni? Oku akukhuselekanga! ' Kodwa abantu apho baya kwenza nantoni na ukuba babukele umdlalo. Ngamanye amaxesha umdlalo we-Premier League abalandeli bayathula kodwa eNigeria niva nje amaxilongo, yonke into. I-atmospheric iyahluke ngokuthelekiswa neNgilani. "
Ngaphandle kokungathandabuzeki, ummandla wamazwe ngamazwe uye waqala ukuvula amehlo kulo msebenzi. U-Iwobi akakwazi ukulinda ukuze afumane ngaphezulu.
I-Alex Itbi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Sekunjalo ngoMalume wakhe
U-Alex Itbi uhlala ekhangele ukulandela ezinyathelweni zikayisekazi kunye nomphathi wangaphambili wase-Nigeria uAustin Jay-Jay Okocha.
"Ingummangaliso kwibhola lebhola laseAfrika kwaye ndiyazi ukuba kuya kufuneka ndisebenze nzima ukuze abantu bathethe ngokulungileyo kum," UWibibi uthe.
"Ukuba naye njengomalume unceda ukuphefumlelwa kodwa andizange ndizuze isikhundla sam ngokuba ngumntakwabo womntu - ndiyifumana indlela yam. Injongo yam kukuba ufumane uninzi lweefowuni njengoko ndinako, fumana iimidlalo ezininzi njengoko ndinako kwaye ndine amanqaku amaninzi eNigeria. "
Ngaphandle kokungathandabuzeki, Okocha usalokhu ungomnye wabantu abanempembelelo ekusebenzeni kukaIbi.
Ngokutsho kukaIbibi, "Sithetha zonke iiveki ezimbalwa. Undicebisa, kungekhona nje kumgca kodwa ude naye. Ibhola liyimisebenzi emfutshane kangangokuthi uhlala emxelela ukuba ndigcine ubomi. Ucebisa ukuba ndibe namashishini kunye neendawo zase Nigeria. Uhlala ezama ukungigcina i-level-headed kunye nokunceda ndicwangcise ikamva emva kwebhola lebhola. "
Ukulandela kwiinyawo zika-Okocha, u-Iwobi ukhethe ukudlala eNigeria esikhundleni seNgilandi.
Kufanelwe ukufakazela ukuba iIbibi imele iNgilani ngaphantsi kwe-16, i-17 ne-18. Wagqiba ekubeni ayeke iqela kwaye akhonze umhlaba kayise.